zawzaw၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
phyuthi သည်zawzawကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မေ 27, 2015
တာတာ သည်zawzawကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
zawzaw joined A BuddhismworldAdmin's group
Ven. Vunna သည်zawzawကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977"
zawzaw သည်တာတာကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
zawzaw replied to Nilar's discussion 'ဓမ္မအားဆေးအလိုရှိပါသည်'
"ဒါန ဆိုတဲ့စာလုံးကို ပညတ်နှင့်ပရမတ် (အခေါ်အရှိနှင့်တကယ်အရှိ) လေ့လာပါ။ ကြိမ်ဖန်များစွာတွေးပေးပါ။"
"ကိုဇော်ဇော်ရှင် အကို့အိမ်ကိုဝင်ရောက်လာလည်သွားပါတယ် ညီမကိုလဲမိတ်ဆွေတစ်ယောက်လိုညိမလေးတစ်ယောက်လိုခင်မင်ပေးပါ"
zawzaw postedastatus
"ကုသိုလ်=ပုည၊ ပုညဆိုတာကောင်းမှု၊ ဓာတ်အားဖြင့် အအေးဓာတ်၊ အအေးဓာတ်ထွက်စေသော အတွေးအကြံ၊ အပြောအဆို၊ အလုပ်အကိုင်ဟူသမျှသည် ကုသိုလ်မည်၏။"
နီစံ (အနီ) သည်zawzawကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
zawzaw ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်
9:10pm အချိန်မေ 27, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:09pm အချိန်ှဧပြီ 30, 2013, တွင် တာတာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:08pm အချိန်ှဧပြီ 30, 2013, တွင် တာတာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:18pm အချိန်ှဧပြီ 9, 2013, တွင် Ven. Vunna မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။
1:58pm အချိန်ှဧပြီ 8, 2013, တွင် တာတာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုဇော်ဇော်ရှင် အကို့အိမ်ကိုဝင်ရောက်လာလည်သွားပါတယ် ညီမကိုလဲမိတ်ဆွေတစ်ယောက်လိုညိမလေးတစ်ယောက်လိုခင်မင်ပေးပါ
5:16am အချိန်နိုဝင်ဘာ 1, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။